အောင်ဆန်းနေ့ | maungpeace
Children of Heaven (စိတ်ချမ်းသာစရာ ခလေးငယ်များ) →
အာဇာနည် ဆိုတာ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် အတွက် အသက်စွန့်သူ။ http://www.thefreedictionary.com/martyr
ဒါဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ် တို့ က အာဇာနည်လား။
ကျနော် ကတော့ အာဇာနည် အဖြစ် မသတ်မှတ်ချင်ဘူးဗျာ။ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်တာလည်း မှန်တယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း သေသွားတာလည်း မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ဘာသာသူ ငါသေမှ ငါ့တိုင်းပြည် လွတ်မြောက်မယ်၊ လွတ်လပ်ရေးရမယ် ဆိုပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ သူများ လုပ်ကြံလို့ သေသွားရတာ။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် ပေါ့ဆလို့ အသတ်ခံရတာ။ စင်ကာပူ ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း လီကွမ်ယူး ဆိုရင်လည်း အာဏာရ ရချင်း ကွန်မြူနစ်ရန် ကြောက်လို့ ချန်ဂီလေဆိပ်နားက အိမ်မှာ ပုန်းနေရတာဘဲ။ မသေခဲ့ဘူး။ (From Third World to First တွင်ရှု့)
ဗိုလ်ချုပ်လည်း သူယုံကြည်မှု အတွက် အလုပ်လုပ်ရင်း အသတ်ခံရတာ မလား လို့ ပြန် ငြင်းချက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါ ဆိုရင် ယုံကြည်ချက်အတွက် အသက်စွန့်တဲ့ သူတွေ အကုန် အာဇာနည် ဖြစ်ရောလား လို့ ဆိုစရာရှိပါတယ်။ ဥပမာ သက်တော်စောင့် ရဲဘော် ကိုထွေးလည်း ဗိုလ်ချုပ်တို့ နဲ့ တချိန်တည်း လုပ်ကြံခံရတဲ့ အတွက် အစိုးရရဲ့ သတ်မှတ်တဲ့ အာဇာနည် စာရင်းမှာ ပါနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်ကို တိုက်ရင်း၊ ဂျပန်ကို တိုက်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေကို ရော အာဇာနည် စာရင်းထဲ မထည့်ဘူးလား လို့ မေးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီ အခါကျရင် ခင်ဗျားက ဗိုလ်ချုပ်တို့ နဲ့ အတူ လုပ်ကြံမခံရတဲ့ အတွက် စာရင်း မဝင်ဘူး လို့ ငြင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အာဇာနည် သတ်မှတ်တဲ့ စံနှုန်းက အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကိုတော့ တိုင်းပြည် အတွက် အလုပ်အများကြီးလုပ်သွားတဲ့ တိုင်းပြည် ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်လို့ဘဲ သတ်မှတ်ချင်တယ်။ အာဇာနည် လို့ သတ်မှတ် မြှောက်ပင့်ပေးပြီး နဲ့ အောင်ဆန်းလမ်းစဉ် မလိုက်နိုင်ဘဲ ပစ်ပယ် ထားတာ ဝမ်းနည်းစရာပါ။
ဝီကီမှာတော့ အာဇာနည်ဆိုရင် ဘယ်လို အစွဲတွေ နဲ့ သတ်မှတ်ကြသလဲ ဆိုတာ အကြမ်းမျဉ်းရှင်းထားပါတယ်။ http://en.wikipedia.org/wiki/Martyr#cite_note-5
၁။ သူရဲကောင်း လူအများ လေးစားဖွယ် အားကျဖွယ် ကိစ္စအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်သူ။ တိုတိုရှင်းရှင်း ပြောရရင် အများအကျိုးဆောင်သူ။
၂။ အတိုက်အခံ အဲဒီလို ကိစ္စမျိုးကို ဆန့်ကျင်သူ။ အများအကျိုး မလိုလားသူ။
၃။ ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားတဲ့ အန္တာရာယ် သူရဲကောင်းရဲ့ အများအကျိုး လုပ်ဆောင်မှု ကြောင့်၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အဲဒီ ကိစ္စကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သူတွေ ဟာ သူ့ကို အန္တာရာယ် ပေးမယ် ဆိုတာ ကြိုမြင်ကြပါတယ်။
၄။ သတ္တိ နှင့် ယုံကြည်ချက် သူရဲကောင်းတွေဟာ အဲဒီ အန္တာရာယ်တွေ ရှိနေပေမဲ့လည်း ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆက်လုပ်ပါတယ်။
၅။ သေဆုံးခြင်း ဆန့်ကျင်သူ က သူရဲကောင်းကို သူရဲ့ အများအကျိုး ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ လုပ်ဆောင်မှု ကြောင့် သတ်ပါတယ်။
၇။ ပရိသတ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှု သူရဲကောင်းသေရင် ဂုဏ်ပြုတယ်။ အဲဒီသူရဲကောင်းကို အာဇာနည်အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်။ တချို့လူတွေက အဲဒီ သူ လုပ်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို စိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့ အတုယူမယ်။
အဲဒီတော့ အခြေခံအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အချက်တွေ အကုန်လုံးနဲ့ ညီပါတယ် လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ နံပါတ် ၃ ကို ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ အန္တာရာယ်ကို ကြိုမြင်တာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်လည်း ကြိုမြင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့မိပါတယ်။ ကြိုမြင်ရင် ပြင်ဆင်ရမှာပါ။ ပေါ့ပေါ့ဆဆ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ကျနော့် အမြင်အရတော့ မသေသင့်ဘဲ သူများသတ်လို့ သေရတယ်။ အဲဒါကြောင့် အာဇာနည် လို့တော့ မသတ်မှတ်သင့်ဘူး မြင်ပါတယ်။ အများသဘော သတ်မှတ်ချင်လည်း သတ်မှတ်ပါ။ ပြီးတော့ နံပါတ် ၇ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ယုံကြည်ချက်၊ လမ်းစဉ်တွေကိုလည်း အတုယူကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာမှ တော့ မယူဘဲနဲ့ အာဇာနည်လို့ သတ်မှတ်တာ လက်တွေ့မပါဘဲ လေနဲ့ မြှောက်ပင့်ပေးနေတာနဲ့ တူပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘယ်လို လူမျိုးက အာဇာနည်လဲ။
ဆိုကရေတီး ဆိုရင်တော့ အာဇာနည် လို့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတွက်၊ ကိုယ် ဟောပြောမှု အတွက် တာဝန်ခံရဲတဲ့၊ အသက်သေမှာ ကို သိသိနဲ့ ထွက်မပြေးတဲ့ အတွက် အာဇာနည် လို့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
အာဇာနည် နေ့ လုပ်တာကို ရော ကန့်သတ်ချင်လား။
မကန့်သတ်ချင်ပါဘူး။ သတိရ အောက်မေ့တဲ့ အခမ်းအနား ဆိုတာ လုပ်သင့်တာဘဲ။ အောက်မေ့ဖွယ် နေ့ အဖြစ်သတ်မှတ် ပြီး လုပ်ချင်လုပ်ပေါ့။ အောင်ဆန်း နေ့ လို့ ခေါ်ရင် ကောင်းမလား။
This entry was posted in opinion (ကိုယ်ယုံကြည်ရာ) and tagged General Aung San, Martyr, Martyr Day. Bookmark the permalink.
One Response to အောင်ဆန်းနေ့
က်ဆံုးသြားရလို႔၊ ဒီလို အနစ္နာခံသြားရလို႔ အာဇာနည္ရယ္လို႔ က်မက ဒီလို သတ္မွတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ မွန္ကန္တဲ့၊ျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္ရွိလုိ႔ အာဇာနည္လို႔ က်မ ကေနၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္တာပါ။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ http://burmese.voanews.com/content/martyr-day-july-19-aung-san-suu-kyi-speech-in-head-quarter/1441254.html)